Dutch's vinte toppers - Eromes - 70 - Ezi ụlọ nke Stuff
Home / Oche / Dutch nkpuru osisi dikwa elu - Eromes - 70
Dutch's vinte toppers - Eromes - 70
Oche ndị a dị mma. Edere ha site na afọ 60 ruo afọ 70. Factorylọ ọrụ Eromes (Netherlands) jiri pagwood ihe na-akwụghachi ụgwọ maka oche na azụ. Eku ahụ bụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ gbara ọchịchịrị na ụda mara mma nke akụkụ ahụ kama ịbụ ụkwụ gburugburu. Ekeputara oche oche ihe omimi ya nke nwere otutu udiri ya na akwado azu.
Nke a bụ oche pụrụ iche, yabụ ọ bụrụ na ịmalite ịmalite ịhụ n'anya ... echela ogologo!
- Erere - ma ugbu a na square na Barcelona iji nwee ike re
EKWU: site na ọrụ anyị @ € 1 / km ma ọ bụ na pallet site na onye ozi na € 72.5 maka ọnụ ọgụgụ buru ibu. Anyị nwere ike iji DPD ziga oche 3 na € 15 n'otu ngwugwu. Europe na € 15 na € 25 kwa ngwugwu.
Categorieën: Oche, Na-ere Tags: eromes, Marko